Iko wachi inowoneka mune mamwe maapplication muiyo iOS 12 dock inorevei? | IPhone nhau
Iko wachi inowoneka mune mamwe maapplication muiyo iOS 12 dock inorevei?
Ngirozi Gonzalez | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
iOS 12 yakaunzwa nenhau zhinji senge kugadziriswazve kwescreen chepamusha, kuvhurwa kwedoko nyowani kana kugadziriswazve kweControl Center. Kwave kuri kugadzirisa zvakafanira asi zvisina kukwana maPads, inoda simba rakawanda nekuda kwekufambira mberi kwehardware iyo Apple iri kuvasanganisa mumakore apfuura.
Nekudaro, zuva rega rega isu tinowana chimwe chinhu chitsva nezve ichi chigadziriso. Doko rinotibvumidza kuti tikurumidze kuve nemaapplication atinoshandisa zvakanyanya. Asi dzimwe nguva, Awa inowoneka kumusoro kurudyi kwemaapp. Zvinorevei? Tingaibvisa sei? Isu tinofungidzira kuti ibasa rine chekuita nehungwaru hwekunyepedzera zvakanyatsoenderana nemaitiro edu.
Hunyanzvi hwekugadzira unoongorora maitiro edu muIOS 12
Mazuva ese isu tinoshandisa kunyorera mune dzakasiyana nguva slots, nguva dzose panguva imwe chete. Hauna kumuka here uye chinhu chekutanga chawakaita kuvhura Safari kuti uwane mapepanhau aunofarira? Kana pamwe izvo zvawakaita kuvhura email uye kupindura kune akakosha pane chekutanga chinhu mangwanani Izvo zveIOS 12 zviri mapatani, maitiro ane mushandisi.
El wachi iri kumusoro kwepamusoro yemamwe maapplication mudoko inoratidza kurudziro yekushandisa iyo yatinowanzoshandisa munguva yakatarwa yatiri. Ndokunge, kana iyo email iri mudoko, wachi ichaonekwa yekutanga chinhu mangwanani (ichitevedzera iyo muenzaniso pakutanga). Kana izvo zvaunoita pakati pemangwanani kupinda muYouTube, iyo wachi ichaiswa pane yeYouTube icon.
Ndicho chishandiso chitsva inosanganisa masevhisi maviri: njere dzekunyepedzera, kuongorora maitiro ekushandisa; uye Siri, zvinoshanda mawachi zvichienderana nenguva yatinosangana. Kunyangwe chishandiso ichi chichiitwa kuita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi, pachave nevanhu vano unoda kudzima basa. Kuti uite izvi uchafanirwa kuita zvinotevera:
Famba yako iPad Zvirongwa
Dzvanya pa «Siri nekutsvaga » uye bvisa sarudzo «Kutsvaga Mazano» uye «Ongorora Mazano».
Dzokera uye pinda chikamu «General»
Dzvanya pa «Multitasking uye Dock » uye kudzima sarudzo «Ratidza mazano uye mafomu achangoburwa»
Shanduko haizove nekukurumidza. Kuti uenderere mberi, bvisa maapplication kubva padoko uye woaisa kumashure mushure mekuita a kutangazve iyo iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Iko wachi inowoneka mune mamwe maapplication muiyo iOS 12 dock inorevei?
Bang & Olufsen vanovandudza Beoplay E8 nekuwedzera isina waya kuchaja
Nyowani mophie Powerstation PDs nekuchaja nekukurumidza uye USB-C